एसिड आक्रमण गर्नेलाई कस्तो कारवाही गर्नुपर्छ ? » Enavanari
एसिड आक्रमण गर्नेलाई कस्तो कारवाही गर्नुपर्छ ?
हाम्रो समाजमा महिलाहरु माथी एसिड प्रहार दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपाली समाजमा यति निच र घृणित भइसक्यो कि कुनै महिलाले विवाह गर्न नमान्दा प्रेम प्रस्ताव अस्विकार गर्दा, दाइजोको मामला र यौन प्रस्ताव अस्विकार गर्दा अन्य झैझगडाको कारणले गर्दा र पुरुष पक्षले महिलाको अनुहार विगार्ने उदेश्यले एसिड प्रहार गरेको देखिन्छ । एसिड विश्वव्यापी रुपमा नै विद्यमान रहेको तथ्याकंहरुले देखाउँछ । वर्सेनी करिव एकसय पचास जना यसका शिकार हुने गरेको पाइन्छ । सबै पक्षबाट यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन प्रभावकारी पाइला चाल्नु पर्ने देखिन्छ । जसमा एसिड आक्रमणमा पर्ने किशोरी महिलाहरुको पिडालाई गम्भीर रुपमा लिदै सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्छ महिलाहरुको पिडालाई गम्भीर रुपमा लिदै सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ साथै सरकार तथा कानूनविदले यस घटनामा संलग्न अपराधीहरुको पहिचान गरि सबैले देख्ने गरि अपराध निकाकरण नै हुने गरि जन्मकैद वा मृत्युदण्डको सजाय हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसको लागी सम्पूर्ण सचेत नागरिक, संघसंस्था, संचारकर्मीले घचघच्याउन पर्ने देखिन्छ । यसरी समाज र राष्ट्रलाई घचघच्याएन भने के थाहा भोली फेरी अर्को शिकार
दुर्गा प्रधान, गीतकार
पछिल्लो समय युवतीमाथी एसिड प्रहारका समाचारहरु मिडियामा आइरहेका छन् । एसिड प्रहारकै कारण कतिपय युवतीले जीवन गुमाएका छन् भने कतिपयले शारीरिक र मानसिक रुपमा बिक्षिप्त बनेर जीवन बाचीरहेका छन् । नेपालमा मात्र होइन नेपाल लगायत भारत, बंगलादेश लगायत बिश्वका थुप्रै मुलुकमा यस्ता घटना हुने गरेका छन् ।
एसिड आक्रमण भनेको ठूलो अपराध हो । यसलाई अन्य सामान्य अपराध सरहको सजायले झारा टार्ने काम गर्नु हुँदैन । यसले पीडितको जिन्दगीलाई तहस नहस बनाएको हुन्छ । एककिसिमले भन्नुपर्दा जीवन मरणको सवाल हो । यसले शारीरिक अपांगता मात्रै बनाउदैन मानसिक रुपमा पनि क्षतविक्षप्त बनाउछ । यस्तो अपराधिलाई नेपालमा मृत्युदण्डको कानून छैन तर मृत्युदण्डको सजाय नै हुनुपर्छ होइन भने पनि सर्वस्व सहित आजीवन कारावासको सजाय हुनुपर्छ । जेल सजाय मात्रै हुदा पिडकले विभिन्न बाहनामा उनमुक्ति पाउन सक्छ, राजनैतिक भरमा, पैसाको भरमा र शक्तिको भरमा कुनैपनि हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुदैन ।
पदम शर्मा, प्रमुख वन्डरसप
पछल्लो समय महिला माथी एसिड आक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यो एकदमै चिन्ताको विषय पनि हो, विभिन्न कारणले गर्दा महिला अझ कीशोर किशोरी माथी एसिड प्रहार भइरहेको छ । अब म कानुनविद त होइन तर कानुनमा भएको सजाय हुनुपर्छ कानुनमा नभएको सजाय मागेर पनि के गर्नु । तर यतिमात्र हो कि दोषि उम्कनु भएन र पिडितलाई क्षतिपूर्ति सरकारले दिलाउनु पर्छ ।
संगीता पन्त थापा, सञ्चारकर्मी
एसिड आक्रमण जघन्य अपराध हो । यसलाई हदै सम्मको कारवाहि हुनुपर्छ । हुनत हाम्रोमा मृत्युदण्डको सजायको व्यास्था छैन तर पीडकलाई पनि पीडितलाई जस्तै महशुश हुने खालको सजाय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । साथै एसिड आक्रमण गर्नेले पीडीत व्यक्तिको उपचारमा लाग्ने खर्च, उसको सम्पूर्ण कुराको क्षतिपूर्ति गराउनु पर्छ र सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय हुनुपर्छ । कुनैपनि शक्तिको भरमा पीडकले उम्कने मौका पाउनु हुँदैन । एसिड आक्रमण जघन्य अपराध हो त्यसैले यसलाई वेवास्ता गरिनुहुँदैन ।
राधिका थापामगर श्रेष्ठ, ब्युटिशियन
हाम्रो समाजमा महिलाहरु माथी एसिड प्रहार दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । मानिसको सोच यति निच र घृणित भइसक्यो कि कुनै महिलाले विवाह गर्न नमान्दा, प्रेम प्रस्ताव अस्विकार गर्दा, दाइजोको मामला र यौन प्रस्ताव अस्विकार गर्दा या अन्य झैझगडाको कारणले गर्दा तथा पुरुष पक्षले महिलाको अनुहार विगार्ने उद्देश्यले एसिड प्रहार गरेको देखिन्छ । एसिड विश्वव्यापी रुपमा नै विद्यमान रहेको तथ्याकंहरुले देखाउँछ । वर्सेनी करिव १५० जना यसका शिकार हुने गरेको पाइन्छ । सबै पक्षबाट यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन प्रभावकारी पाइला चाल्नु पर्ने देखिन्छ । जसमा एसिड आक्रमणमा पर्ने किशोरी महिलाहरुको पिडालाई गम्भीर रुपमा लिदै सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ, महिलाहरुको पिडालाई गम्भीर रुपमा लिदै सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ साथै सरकार तथा कानूनव्यवसायीले यस घटनामा संलग्न अपराधीहरुको पहिचान गरि सबैले देख्ने गरि अपराध निकाकरण नै हुने गरि जन्मकैद वा मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसको लागि सम्पूर्ण सचेत नागरिक, संघसंस्था, संचारकर्मीले घच्घच्याउन पर्ने देखिन्छ । यसरी समाज र राष्ट्रलाई घच्घच्याइएन भने के थाहा भोली फेरी अर्को शिकार हामै्र दिदीबहिनी पनि हुन सक्छन् ।
एसिड प्रहार गर्ने अपराधिको उदेश्य पीडितलाई शारीरिक रुपमा क्षति पुर्याउनुका साथै उसको परिवारलाई पनि जीवनभर मानसिक रुपमा टर्चर दिने हुन्छ । यस्ता घटनालाई यदि बेलैमा कन्ट्रोल नगर्ने हो भने अपराधिक मानसिकता भएका अरु व्यक्तिहरुमा पनि यो घटनाले प्रश्रय पाउन सक्छ । त्यसैले यस्ता अपराधिक घटनालाई कम गर्नको लागि अपराधिलाई पनि त्यसको सजाय दिनुपर्छ । जसले अरुलाई पनि त्यसैगरी जीवनभरी तड्पाओस् ताकि अरुलाई पनि यस्तो सजाय देखेर त्यस्तो कुकर्म गर्ने दुस्साहस नहोस् ।
यसको लागि संविधान सभा नै संसोधन गरेर भएतापनि बलात्कारी र एसिडप्रहार गर्ने अपराधिलाई आजीवन कारावासको सजाय गरीनुपर्छ । हुनत अपराधिको पनि मानवअधिकारको कुरा हुने गर्छ तर यसलाई नहेर्ने हो भने अरुलाई पनि त्यो पीडाको अनुभव गराउने खालको शारीरिक र मानसिक सजाय पनि दिनुपर्छ ताकि अरुहरुलाई पनि सवक मिलोस् । हाम्रो देशको आनूनी बिषय फितलो र राजनैतिक तथा अन्य शक्तिहरुको आडमा बलात्कार र एसिड प्रहार जस्तो जघन्य अपराधले उन्मुक्ति पाउने संभावना भएकोले यसको बिरुद्धमा पत्रकार, जनता सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने देख्छु ।
अञ्जन शाही, व्यवस्थापक कण कण चिया
सवै पुरुषको मात्र गल्ती हुदैन महिलाको पनि उतीकै गल्ती हुनसक्छ एसिडको मामलामा एसिड आक्रमण गर्नेमा पछिल्लो समय पुरुषमात्र अगाडि देखिन्छन । मेरो विचारमा त यस्ता अपराधिलाई फाँसिकै सजाय हुनुपर्दछ तर नेपालमा फाँसीको सजाय छैन । गल्ती गर्नेलार्ई सजाय त कानुन बमोजिम हुनैपर्छ, यति कानूनमा सजाय कडारुपमा तोकिएको छैनभने त्यसको व्यावस्था गरिनुपर्छ । एसिड आक्रमण गर्नेमाथि तर भविष्यमा यस्ता आक्रमणहरु नदोहोरिउन भन्नको लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्नु अति आवश्यक छ ।